सबैभन्दा धेरै नाफा कमाएका विश्वका १० स्मार्टफोन | Jukson
दुनियाँमा सबैभन्दा धेरै मुनाफा कमाउने स्मार्टफोन कुन कुन हुन् ? सायद यो चासो धेरैको हुनसक्दछ । रिसर्च कम्पनी काउन्टरप्वाइन्टले सन् २०१७ को चौथो त्रैमासिकको तथ्यांकको आधारमा विश्वमा सबैभन्दा धेरै मुनाफा कमाउने १० स्मार्टफोनको सूची तयार पारेको छ । यी १० स्मार्टफोनले विश्वमा उक्त अवधिमा कुल बिक्री भएका स्मार्टफोनको ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।
यी हुन् उक्त तिन महिनामा विश्वमा सबैभन्दा धेरै मुनाफा कमाउने १० स्मार्टफोन:
१. एप्पल आइफोन एक्स: एप्पलको आइफोन एक्स विश्वमा सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने स्मार्टफोन हो । रिपोर्ट अनुसार यस अवधिमा आइफोन एक्सले स्मार्टफोन उद्योगमा स्मार्टफोन बिक्रिबाट हुने कूल फाइदाको ३५ प्रतिशत योगदान दिएको छ । आइफोन एक्सको योगदान यस अर्थमा पनि महत्वपूर्ण छ कि सन् २०१७ को चौथो त्रैमासिकको अन्तिम दुई महिनाबाट मात्र यो मोडल बजारमा उपलब्ध थियो । अर्थात् सार्वजनिक भएको दुई महिनामै यसले सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने स्मार्टफोनको रुपमा आफुलाई उभ्याउन सफल भएको छ ।
‘न्याप्किन’ ट्रेलर रिलिज
फिल्म 'रणवीर'को ‘तिरीमिरी तीन तारा...’ गीत रिलिज (भिडियोसहित)